Fractional CO2 Laser Resurfacing Indlela esebenza ngayo: Fractional carbon dioxide (CO2) izixhobo zokuphinda zisebenzise i-laser zisebenzisa ukukhanya kwe-infrared okuhanjiswa ngombhobho ozele yicarbon dioxide ukwenza amanxeba emicroothermal kwizicubu ekujoliswe kuzo. Njengoko ukukhanya kufunxwe lulusu, izicwili ziyaphefumlwa, zikhokelela ...
Ukuba ukhe wazama nzima ukulahla amanqatha enesisu anenkani, izibambo zothando kunye nezinye iintlobo zamafutha omzimba, ngokungathandabuzekiyo uthathe ingqalelo kwiintengiso ezininzi zikamabonwakude zeCoolSculpting. Ezi ntengiso zigqamisa oku kunyango olungafunekiyo lokususa amanqatha asala emva kokutya kunye nokuzilolonga ...
Ukususwa kweenwele ngokusisigxina kwe-808
Inkqubo yokupholisa ukubamba isafire eqinisekisa ukuba unyango lukhuselekile kwaye alunantlungu. Ikhuselekile Itekhnoloji esemva kwe-Diode 808 laser iqinisekisa ulusu ukuba lubambe ii-lasers ezimbalwa, ukunciphisa umngcipheko we-pigment-pigmentation. Ngokukhawuleza ukutyibilika okukhawulezayo, ububanzi bokubetha okude, indawo enkulu, kunye nethuba lokupholisa kakhulu kwenza ...